Arrimaha KL -
Waajibaad xusuusta: Maxaa mustaqbalka loogu talagalay DR Congo oo wajahay laba madaxweyne ee Jamhuuriyada 14 / 01 / 2012 ... (Audio)
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 13, 2017 4: 44 No Comments
Shirka doodda ee 14 / 01 / 2012. Maxaa mustaqbalka loogu talagalay DRCongo oo wajahay laba madaxweyne ee Jamhuuriyada; hal sharci iyo hal sharci ... (Video) Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 6, 2017 2: 40 No Comments
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 1, 2017 4: 16 No Comments
Waaba Waxaan illoobin: KL soo bandhigay uu falanqaynta xaaladda M23 ah, (dhulka) 21 / 11 / 2012 ... (Audio)
Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 27, 2016 12: 00 No Comments
KongoLisolo Soo bandhig: falanqayntiisa xaaladda M23, (Congo) 21 / 11 / 2012.	Akhri wax dheeraad ah
Waajibka in la Xusuusto: Kinshasa waxay ku jirtaa keega budada ah! Waa maxay mustaqbalka DRC? 26/11/2011… (Maqal)
Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 25, 2016 6: 18 No Comments
Kinshasa waxay ku jirtaa keega budada ah! Waa maxay mustaqbalka DRC? KongoLisolo Marie Jeanne ~ Lanza Kirby waxay martigelinaysaa bulshada rayidka ah iyo Gabriel Maindo oo ah caan ah si ay uga wada hadlaan. (Video)	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 19, 2016 11: 05 No Comments
Wax kasta waxay timaadaa waqtiga saxda ah: maroodi iyo buste ayaa isla markaa uur yeelatay "Saddex bilood ayaa la soo dhaafay oo qashin-qaadku wuxuu dhashay dhalashada 6; Seddex bilood ka dib, eeygu mar kale way uur qaadeen; saddex bilood ka dib, waxay dhashay dhalashada (3). "Miisaanku wuxuu sii waday qashinka
Haddii waxkasta oo ku xeeran Equatorial Belt ay yihiin dhaqan madow, in dadka kuleylkii ugu horreeyay ay ahaayeen madoow iyo in dadkii ugu horreeyay ee dhulalka oo idil ay madow yihiin… Marka sidee ayaan u rumeysan karnaa inaysan sidoo kale soo marin Siberiyaanka inta lagu gudajiray socdaalkii dheeraa?
Maxaa ka cabsi qabay inay dhacdo? Balkanization ee Kongo
Aqoonta Zoologiyada: maxaad ugu yeeraa Hippopotamus afkaaga hooyo? … Hippopotamus-ka, oo ay hoos timaado hawadooda qalbi furan, runti waa noocyada duurjoogta ah ee ugu badan boqortooyada xayawaanka… Hunter dhabarka dambe ee Hippopotamus lama siinayo qof walba. Kaliya melanin ayaa leh awoodaan ”
Feb24 12: 59